980nm diode icebo eliphethe umtha wokukhanya omninwaname varicose spider vein nokususwa icebo eliphethe umtha wokukhanya omninwaname unyango umatshini kuba ziyathengiswa njengoko-vl-icebo eliphethe umtha wokukhanya omninwaname ubuhle umatshini-Hunan Astiland Zonyango Aesthetics Iteknoloji Co., Ltd.
Igazi elibomvu elibangelwa kukuvela kwe-capillary kunye ne-venous, kwaye ukuqina kwesikhumba kukwakho nesinye sezizathu. I-980nm ye-laser ebomvu enomthambo wegazi laser yamkela i-wavelength ye-980nm laser ukususa i-vascular, isebenza kuzo zonke izizathu ezibangela ukubonakaliswa kwe-capillary.
Igazi elibomvu elibangelwa kukuvela kwe-capillary kunye ne-venous, kwaye ukuqina kwesikhumba kukwakho nesinye sezizathu. I-980nm ye-laser ebomvu enomphandle we-laser umshini wamkela i-wavelength ye-980nm laser ukususa i-vascular, iyasebenza kuyo yonke loo nto ibangele ukuvezwa kwe-capillary. Ngexesha lonyango, inokuvuselela i-collagen yolusu ukuba iphinde iphinde inyuse kwaye inyuse ubukhulu bebala kunye nobunzima. Ngale ndlela, i-vascular iyanyamalala kwaye i-elastic yolusu iyanda. I-Porphyrin engaphakathi kwinqanawa ifumana i-980nm laser kwaye yabangela ukuqubuka kwemithambo yegazi emva koko yanyamalala, i-laser ayiyi kulonakalisa ulusu konke konke.
1.Unyango olugqibeleleyo ngokujonga ukukhanya kunokuhlengahlengiswa
Ukukhutshwa kwamandla okuphezulu kwe-2.30W
3.Ingakhuseleki, ayinazintlungu, unyango olukhawulezileyo
Isikrini sokuchukumisa umbala esiseModern
5.Okuqhutyekeka, pulse, iimowudi zonyango ezizodwa ezisebenzayo
6.Ubume besandla sokuyila kobungakanani bendawo ngokobubanzi benqanawa
7.Imeko yokulimala enobunzima be-ABS enendawo yokugcina
I-1.980nm laser yeyona nto ifunekayo yokufunxa iiseli zemithambo ye-porphyrin. Iiseli zemithambo-luvo zifumana i-laser yamandla ephezulu ye-980nm wavelength, ukuqina kwenzeka, kwaye ekugqibeleni kuchithwe.
2.Ukuhlula ukunyanga ngokubomvu kunyanga lwelaser kwindawo enkulu yokutsha ulusu, uyilo lobungcali ngesandla, yenza ukuba ukugxila kwe-laser kudidi ububanzi be-0.2-0.5-XNUMXmmmm, ke amandla agxile ngakumbi ekufikeleleni kwizicubu ekujoliswe kuzo, ngelixa kuthintela ukutshisa izicubu zesikhumba ezijikelezileyo.
I-3.Laser inokunyusa ukukhula kwe-dermal collagen ngelixa unyango lwe-vascular, ukunyusa ubukhulu be-epidermal kunye nobunzima, ukuze imithambo yegazi emincinci ingasabonakali, ngaxeshanye, ulusu kunye nokuxhathisa kolusu kuphuculwe kakhulu.
4.System esekwe kumanyathelo atshisayo e-laser. I-transcutaneous iradiation (ngokungena ngaphakathi kwe-1 ukuya kwi-2 mm kwezicubu) ibangela ukufunxwa kwezicubu kukhethwe yi-hemoglobin (hemoglobin yeyona nto kujolise kuyo i-laser).
I-Pulse eyodwa, iPulse, CW
> Iiyure ze10,000
I-diode laser 3mW 635nm
Ukupholisa umoya omkhulu
I-AC 220V / 110V 50 / 60HZ 5A / 10A